Aung Win Hein (Noble): 02/18/12
"ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖတ်ဖို့- ၇..."
ပျော်တဲ့သူဟာ သူ့စိတ်ကိုက အားရှိနေတယ်။ အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
အလုပ် ပိုလုပ်နိုင်တယ်။ အလုပ် ပိုပြီးတယ်။ တီထွင်ပြီးလုပ်တယ်။
လူတွေနဲ့လည်း အဆင်ပြေအောင် ပြောတတ်တယ်။
ခင်တတ်တယ်။ ပျော်နေတဲ့သူကို လူတွေက ပိုပြီးခင်တယ်။ ပိုပြီးယုံကြည်တယ်။
ဒါကြောင့် အလုပ်အကိုင် ပို အဆင်ပြေပြီး ဝင်ငွေပိုကောင်းတယ်။
ဘယ်အလုပ်လုပ်လုပ် ပျော်တဲ့သူက ပိုတိုးတက်တယ်။ ပိုအောင်မြင်တယ်။
ဒါကြောင့် အကျိုးအမြတ်ကို ပိုခံစားရတယ်။ အမှုထမ်းဆိုရင်လည်း အလုပ်မှာ
ပျော်နေတဲ့သူကို လစာ တိုးပေးတယ်။ ရာထူးတိုးပေးတယ်။
၄။ More likely to haveastronger immune system.
ပျော်နေတဲ့သူဟာ ကိုယ်ခံအား ပိုကောင်းတယ်။ ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းတယ်။
ဒါကြောင့် ရောဂါဖြစ်တာ နည်းတယ်။ ဖြစ်လာရင်လည်း ပျောက်တာ မြန်တယ်။
ဆေးကုသစရိတ် နည်းတယ်။ မကျန်းမာလို့ ခွင့်ယူရတာ နည်းတယ်။
ကျန်းမာနေရင် ပျော်တယ်။ ပျော်ရင် ကျန်းမာတယ်။
ကျန်းမာနေရင် ပျော်နေရင် အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ပျော်တယ်။
(ပျော်ပျော်နေပါဆိုလို့ အပျော်အပါးလိုက်စားပါလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။)
စိတ်ချမ်းသာအောင် စိတ်ထားတတ်ဖို့ အဓိကပါ။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အားကစားတစ်ခုခု လုပ်ပါ။
ဆရာဝန်အနေနဲ့ လူနာကို စိတ်ချမ်းသာအောင် အားတက်အောင် ပြောရင်
လူနာ မြန်မြန် နေကောင်းလာမယ်။
လူနာရဲ့ အားငယ်စိတ် ကြောက်စိတ် စိုးရိမ်စိတ်ကို သက်သာအောင် လုပ်ပေးပါ။
လူနာရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရအောင် လုပ်ပါ။
၅။ More likely to live longer.
ပျော်ပျော်နေ သေခဲ လို့ဆိုတာ ကြားဖူးတယ်။
ပျော်တဲ့သူ စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာ နုပျိုတယ်။
အကောင်းဆုံးဆေးကတော့ စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတာပဲ။
စိတ်ချမ်းသာနေတာဟာ ကျက်သရေရှိတယ်။ ချစ်စရာ ခင်စရာကောင်းတယ်။
ဒါကြောင့် နုပျိုလှပပြီး ကျန်းကျန်းမာမာ အသက်ရှည်ချင်ရင်
စိတ်ချမ်းသာအောင် အမြဲ တရားအားထုတ်ပါ။
လူတွေကို ချစ်ချစ်ခင်ခင် လေးလေးစားစား ဆက်ဆံပါ။
တကယ်တော့ ဘယ်ဟာမှ သိပ်အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကို နားလည်ပါ။
၆။ More likely to enjoy larger social rewards.
More likely to marry.
ပျော်နေတဲ့သူဟာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အလားအလာများတယ်။
စိတ်ဆင်းရဲနေတတ်တဲ့သူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်နဲ့ မရွေးချယ်ချင်ကြပါဘူး။
စိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ အိမ်ထောင်ပြုရမလဲ။
ဒါကြောင့် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေတတ်တဲ့သူ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူကို
အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်ကြဖို့ အလားအလာ ပိုများတယ်။
Less likely to become divorced.
ပျော်နေတဲ့သူဟာ အိမ်ထောင်ကွဲဖို့ အလားအလာ နည်းတယ်။
မပျော်တဲ့သူချင်း အတူနေရင် လမ်းခွဲဖို့ အလားအလာ များတယ်။
ပျော်တဲ့သူချင်း အတူနေရင် လမ်းခွဲဖို့ အလားအလာ နည်းတယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မပျော်ရင် အတူမနေချင်ဘူး။
အတူတူ အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး။ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ချင်ဘူး။
အဖော်လိုချင်ရင် ပျော်အောင် နေပါ။